Soo dejisan aTube Catcher 3.8.9152 – Vessoft
Leh awood uu ku abuuro shabakad deegaanka sare ee internetka madal ayaa ciyaarta. Software wuxuu taageeraa tiro badan oo ah kulan oo chat haboon isgaarsiinta.
Qalab Handy reserved iyo socdo kaararka garaafyada ka horumarinta kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la qabsato goobaha qaar ka mid ah ka dhigi xawaaraha sawirada kombiyuutar.
Software in la soo dejisan iyo casriyeyn badeecada ka Adobe. Sidoo kale software soo bandhigayaa warbixin ku faahfaahsan oo ku saabsan codsiyada la heli karo si ay u soo bixi.
software waxaa loogu talagalay si aad u nadiifiso nidaamka, wanaajiyo ammaanka guud, soo kabsadaan ka shaqeynayaan computer iyo ka saar bixisay fiidda oo hawlaha Internetka.